नैतिकताका आधारमा मन्त्री बाँस्कोटाद्वारा राजीनामा
काठमाडौँ, ८ फागुन : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आफ्ना बारेमा प्रश्न उठेको जनाउँदै नैतिकताका आधारमा आज पदबाट राजीनामा दिएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा संलग्न छैनौं- स्वीस राजदूतावास
काठमाडौं, ८ फागुन । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिशनको सेटिङमा स्वीस कम्पनिको स्थानीय एजेन्ट भनिएका विजय मिश्रसँग कुनै सम्पर्क नगरेको नेपालस्थित स्वीटजरल्याण्डको राजदूतावासले दाबी गरेको छ । आज प्रेस
राजीनामापछि बाँस्कोटाले बोले : नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएँ
काठमाडौं, ८ फागुन । गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट राजीनामा दिएकोबारे आफ्नो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले नैतिकताका आधारमा आफूले राजीनामा दिएको स्पष्ट पारेका छन् । सामाजिक सञ्जाल
गोकुल बाँस्कोटाको पत्रकार सम्मेलन स्थगित्
काठमाडौं, ८ फागुन । सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले कमिशनबारे टेप प्रकरण बाहिरिएपछि पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राजीनामासँगै उनले आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो
नेकपाका तीन नेताको तीनथरी काण्ड
काठमाडौं, ८ फागुन । सर्वहाराको पार्टी भन्दै सादा जीवनको वकालत गरेर राजनीतिको सीढीं चढेका कम्युनिष्ट नेताहरु विलासी जीवन बिताउने थालेको जगजाहेर नै थियो । तर, उनीहरु त्यही विलासीताले भाँसमा पर्दै
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डको सुझाव : बाँस्कोटालाई राजीनामा दिन लगाउनुहोस
काठमाडौँ, ८ फागुन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भेटमा अध्यक्ष दाहालले ७० करोड रुपैयाँ कमिसनमा
मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा माग्दै कांग्रेसद्वारा राष्ट्रियसभा अवरुद्ध
काठमाडौं, ८ फागुन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियसभा बैठक अवरुद्ध गरेका छन् । बिहीबार बसेको बैठकमा काँग्रेस सांसदहरुले सेक्यरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा मन्त्री बाँस्कोटाले कमिशनको मागेको अडियो
अनेरास्ववियुका संयोजक महर भन्छन् : सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ
काठमाडौं, ८ फागुन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले विवादमा मुछिएका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएका
मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा देलान् त ? अध्यक्षद्धय ओली-दाहाल छलफलमा
काठमाडौं, ८ फागुन । अरवौंको प्रोजेक्टमा करोडौं घुसको डिल गरेका सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले राजीनामा देलान् त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बाँस्कोटाले कमिशनको लागि बार्गेनिङ
सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई हटाउन काँग्रेस र राप्रपाको माग
काठमाडौं, ८ फागुन । नेपाली काँग्रेसले सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ । काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गरी ७० करोड कमिसनको अडियो सार्वजनिक भएको उल्लेख
कोरोना संक्रमण नभएको पुष्टि भएपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिना पुगे खरिपाटी
फागुन ७, काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाईन पुगेर चीनबाट फर्किएका नेपालीहरुको अबस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । सरकारले चीनबाट उद्धार गरी भक्तपुरको खरिपाटीस्थित क्वारेन्टाइनमा राखिएका नेपालीहरुको
ओलीको रणनीति : कांग्रेसको सहयोगमा एमसीसी संसदमा
फागुन ७, काठमाण्डौ । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन, अर्थात एमसीसीको मुद्दाले नेपाली राजनीति तातेको लामै समय भसक्यो । तर अझै पनि एमसिसि संसदबाट पास गराउने की नगराउने भन्नेमा